Banqatshelwe ibheyili abasolwa ngokubulala u-Andile 'Bobo' Mbuthu
Mcebo Mpungose | July 23, 2020
ABASOLWA abayisithupha ecaleni lokubulawa ngesihluku kwebhungu lasoThongathi u-Andile 'Bobo' Mbuthu bemsola ngokweba utshwala banqatsheliwe ibheyili. Lokhu kuvezwe abophiko lwezokushushisa kuleli iNational Prosecuting Authority (NPA) ngoLwesithathu.
"Abasolwa ecaleni lokubulawa kuka-Andile Mbuthu bavele enkantolo yemantshi eVerulam namhlanje (izolo) bezolalela isinqumo ngezicelo zebheyili abazifakile. Inkantolo izichithile izicelo zabo," kusho okhulumela iNPA.
Abasolwa okungoMnuz Mlungisi Thabethe (28), Andile Nhleko (27), Mncedisi Mzobe (27), Siyanda Msweli (26), Lindani Ndlovu (22) noMalusi Mthembu (27) babhekene namacala okubulala nokuthumba u-Andile “Bobo” Mbuthu (18) obefunda uGrade 12 eNkosebomvu Secondary ngo-Ephreli nonyaka. Kwababoshiwe kuthiwa kukhona nesihlobo sikamufi.
Icala lihlehliselwe u-Agasti 17 ukunikeza abaphenyi isikhathi sokuqhubeka nophenyo.